Fotoana famakiana: 6 minitra(Last Nohavaozina: 06/11/2020)
Ny olona rehetra dia manonofy ny Spring ho an'ny mafana. Tsy azo atao mihitsy fotoana tsara tarehy tany Eoropa, rehefa ny oram-panalan'i ririnina manome lalana ny fanavaozana ny lohataona. Valan-javaboary sy tonga velona ny zaridaina ary mamerina ny fiainana indray ny tanàna. Mandeha any Eoropa amin'ny lohataona, mialoha ny fahavaratra maro be, mahafinaritra ihany koa ny fotoana ampahany ny vahoaka Eoropeana raha ny fitandremana ny vola lany any amin'ny namana sorony-vanim-potoana tahan'ny. Tsy hojerentsika ny sasany amin'ireo tena toa marina, mampientam-po, ary toerana mahavariana ho an'ny Traveling in Europe amin'ny Lohataona.
Rehefa milatsaka ny fotsy ho any lohataona, ny Hongroà renivohitra tena tonga amin'ny fiainana. Tsy fahazoan-dalana mankany hanasongadinana ny antoko eo amin'ny sehatra Budapest tonga Spring. Misy lafiny rehetra ny hetsika ara-kolotsaina ary ny fampirantiana ny hanatrika. Mpitsidika dia afaka am-pofoany ny fanao isan-taona Pálinka Festival, mampiseho tastings mahery 300 karazana Brandy, raha ny Spring Festival, roa herinandro mahatalanjona, mitaona ao amin'ny sarambabem-bahoaka ao sy ny Fusion ny Alaina, Jazz sy ny izao tontolo izao fampisehoana mozika.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary omeo anay fotsiny ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/traveling-europe-spring/ - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)